warkii.com » NADIIFIN: Real Madrid Oo Kooxdeeda Ka Diraysa 17 Xiddig Oo Iib Iyo Amaah Loo Diyaariyey
Jubaland oo ciidanka Kenya ka leexisay dadkii Gedo lagu laayey, si kalena u rogtay
NADIIFIN: Real Madrid Oo Kooxdeeda Ka Diraysa 17 Xiddig Oo Iib Iyo Amaah Loo Diyaariyey
Real Madrid ayaa isku diyaarinaysa inay isbeddel ku samayso safkeeda, isla markaana ay xili ciyaareedka dambe kula soo laabato wajiyo cusub iyo laacibiin sii difaacan kara horyaalka LaLiga ee ay sannadkan ku guuleysteen.
Real Madrid oo ka cabanaysa dhaqaale xumo uu soo gaadhsiiyey fayraska Korona oo albaabada u laabay dukaamadii iyo garoonka ay lacagtu kasoo geli lahayd si la mid ah kooxaha kale, ayaa waxa u raacday garoonka Santiago Bernabeu oo uu ka socdo dhisme dib loogu cusboonaysiinayo, kaas oo sidii heshiiska dhismihiisu dhigayay ay u bixinayso lacagta.
Ciyaartooyo mushaharooyin badan ka qaata oo aan waxba ku tarin ayaa Real Madrid uu dhaqaale kaga baxaa, waxaana ka mid ah Gareth Bale iyo James Rodriguez, waxaana qorshuhu yahay in kooxda laga diro 17 ciyaartoy oo ay ku jiraan labadan xiddig.
Ciyaaryahannadan ayaa waxay iskugu jiraan kuwo kooxda koowaad ka tirsan oo la iibinayo ama amaah lagu dirayo, laacibiin ku maqnaa naadiyo kale oo isla kooxahoodu iibsanayaan iyo ciyaartooyo kale oo amaah ku maqnaa oo aan lasoo celin doonin.
Wargeyska Marca oo warkan qoray ayaa waxa uu tilmaamay in liiska ciyaartoydan ay ku jiraan xiddigo da’yar oo loo arkayay inay yihiin mustaqbalka kooxda.
Warbixintu waxay sheegtay qiimaha ciyaartoydan lagu iibinayo iyo xilliga uu ku egyahay heshiiska ay Real Madrid kula jirto, waxaanay kala yihiin:
Iibin: 32 Milyan oo Euro
Iibin: 32 milyan oo Euro.
Amaah ayaa kusii maqnaan doonaa: 45 milyan oo Euro ayaa qiimihiisu taagan yahay
Amaah ayuu kusii maqnaan doonaa: 20 milyan oo Euro ayuu qiimihiisu taagan yahay
Iib ama amaah: 16 milyan oo Euro.
Iibin: 16 milyan oo Euro
Iibin: 12 milyan oo Euro
Iibin: 13 milyan oo Euro
Amaah: 13.5 milyan Euro ayuu qiimihiisu taagan yahay
Iibin: 11 milyan oo Euro
Iibin: 6 milyan oo Euro
Iibin: 3.2 milyan Euro
Iibin: 2.7 milyan oo Euro
Iibin: 2 milyan oo Euro